iPhone maka Sale: Olee na-ere gị Ji iPhone maka A Mma Ahịa
iPhone maka Sale: Must-Hà Tupu ere Your Old iPhone
E nwere dị iche iche ihe na-ere gị iPhone. Nwere ike ị chọrọ nweta nkwalite ndị iPhone 4 ka iPhone 5S; ọ na-agbajikwa na ị na-achọghị iji rụkwaa ya; dị nnọọ receieved onye ọhụrụ maka ụbọchị ọmụmụ; ma ọ bụ nnọọ na ị chọrọ ka ịgbanwee gaa na ihe Andorid ekwentị dị ka Samsung Galaxy S5. N'agbanyeghị mere na ị chọrọ na-ere gị eji iPhone, ị ga-achọ inwe ezi price. Tupu ị na-ere ya, e nwere ka ihe ọzọ dị mkpa ka ị ntị.
# 1. Ndabere gị iPhone data
Dị ka a kwa ụbọchị nkwurịta okwu ngwá ọrụ, na-iPhone eburu nza nke onye data maka ọrụ ma ọ bụ ndụ. Mkpa ka ị ndabere gị iPhone tupu ị na-ere ya. Iji ndabere gị iPhone, e nwere ụzọ dị iche iche nzute dị iche iche choro.
1) Ọ bụrụ na ị nọgide na-abụ ihe iPhone onye ọrụ, ụzọ kasị mma ndabere gị iPhone bụ iji iTunes ma ọ bụ iCloud. Ị nwere ike ndabere gị iPhone na otu click site iTunes ma ọ bụ iCloud. Mgbe ahụ ị pụrụ nanị weghachi ya na gị na ọhụrụ iPhone.
2) chọrọ iji a ekwentị dabeere na ndị ọzọ na usoro dị ka Android? Mgbe ahụ, ị ​​na-agaghị na-azọrọ na e ndabere gị iPhone na iTunes ma ọ bụ iCloud, n'ihi na i nwere ike iji nkwado ndabere na mpaghara faịlụ n'ọdịnihu n'ụzọ ọ bụla, ọbụna na-agụ ya. Kara gị mma iji a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ na-esi gị iPhone kwadoo na kọmputa gị, nke mere na ị nwere ike mbubata ha ọhụrụ gị na ekwentị.
Ma ọ bụ i nwere ike dị nyefee niile data si ochie iPhone ọhụrụ gị na ekwentị n'ihu nke na-ere. My nkwanye bụ nke abụọ na otu. Ọ bụ nnọọ mfe. Echegbula banyere ngwá ọrụ. Ị nwere ike iji MobileTrans, nke na-ahapụ gị nyefee data n'etiti iPhone, Android igwe na Symbian igwe. Ọ bụ nnọọ smart.
Ị nwere ike nweta ya ebe a: Download nzọ version for free.
# 2. Ihichapu niile data na Mmanu iPhone
A ga-mara mma onye data dị ka messaegs, kọntaktị, foto, akụ accouts na ndị ọzọ dị ka nke a na gị iPhone, n'ihi na ị na-na na na-eji ya maka nnọọ ogologo oge. Ya mere, na-adịghị kpọmkwem ere gị iPhone enweghị eme a nhichapụ ọrụ. Ị ga-emerịrị ya. Nke a bụ ihe dị ukwuu dị mkpa dị ka akwado gị data, ma ọ bụ ị ga-atụfu nzuzo gị. E nwekwara ụzọ abụọ ka ihichapu niile data na gị ji iPhone.
1) Tọgharia gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala: Ọtụtụ ndị na-ahọrọ otú a ka ihichapu niile data na ha iPhones mgbe ha chọrọ ime nke a. Ọ dị mfe: na-aga Ntọala> Ozuruọnụ> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala. Mgbe ahụ, gị iPhone ga-aghọ onye ọhụrụ.
2) Ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ data mgbake omume na ahịa, ị nwere ike ịbụ nchegbu na ndị ọzọ nwere ike agbake data gị iPhone. Ọ dịghị mkpa. Ị nwere ike ịhọrọ iji a ọkachamara iPhone data nchicha na-esi gị iPhone azụ ọhụrụ.
Ere gị Tiwara Etiwa iPhone maka A Mma Ahịa
Mkpa ka ị mara tupu ịzụrụ a eji iPhone
Olee otú Naghachi Data site na mmiri mebiri emebi iPhone
Chọta Right Ozi maka otú ndozi Broken iPhone
General Tiwara Etiwa iPhone rụkwaa Nhọrọ N'okpuru:
Olee otú Dochie iPhone Home Button
Olee otú Dochie iPhone mkpọchi Button
Olee otú Dochie iPhone n'azụ igwefoto
Olee otú Dochie iPhone Earpiece Ọkà Okwu
Olee otú Dochie iPhone 4S / 4 Ihuenyo
Nduzi n'ihi na Dochie iPhone Battery
iPhone bụghị Nzahachi: Otú idozi ya
Olee otú Idozi A Nkwarụ Iphone
3 Ụzọ Nyefee Notes si iPhone ka PC / iCloud
A Full Guide na Olee otú ka mmekọrịta iPhone
> Resource> iPhone> Must-Hà Tupu ere Your Old iPhone